‘शेयर मूल्यले नै देखाएको छ विकास बैंक कति सबल र विश्वासयोग्य छन्’ - Aarthiknews
‘शेयर मूल्यले नै देखाएको छ विकास बैंक कति सबल र विश्वासयोग्य छन्’
अहिले तरलता अभावको चरम संकटसँग नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जुधिरहेका छन् । अन्य हिसाबले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको भेदभावमा परिरहेका नेपालका विकास बैंकहरु नीतिगत समस्याका कारण पनि उतिकै ग्रसित छन् ।
एकातिर वाणिज्य बैंकसँगको प्रतिस्पर्धा अर्कातिर नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले साँघुरो पारेको दायरा, विकास बैंकहरुको पिडा बेग्लै छ । तर पनि आफूहरूले आम नागरिकमा बैंक चिनाएको, तल्लो वर्गलाई सेवा दिएको र वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा अतुलनीय योगदान गरेको गर्भ गर्ने अधिकार भने विकास बैंकहरुसँग नै छ ।
यही पृष्ठभूमिमा आर्थिक न्युज डटकमले महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बोधराज देवकोटासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंशः
तरलता अभावले अहिले पनि गाँजिरहेको छ । किन हुन्छ सधैँ यस्तो ?
सामान्यतया: हाम्रोमा यो बेला तरलता अभाव सनातन समस्या नै हो । यो एक ढंगको संरचनागत र नीतिगत समस्याको उपज हो । त्यसमाथि यस वर्ष नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गतसालको उत्साहजनक उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर सिडी रेसियोमा केही कडाइ गर्‍यो । एकातिर अर्थतन्त्रका आधारभूत विषयहरूले नै यस बेला तरलतामा दबाब सिर्जना गरिरहेका थिए । त्यसै बेला नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशनले दबाबलाई अझ बढाएको हो ।
कोरोनाको त्रास हटेसँगै जसरी हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्दै गयो । त्यसले पनि तरलता अभाव महसुस हुने नै अवस्थामा पुर्‍याउँदै थियो । अनि यसै बेला राज्यको ढुकुटीमा पैसा थपिने तर त्यहाँबाट नबाहिरिने घटना पनि पहिलेभन्दा चर्को बनेर गयो । खासमा अहिले यति चर्कोगरि तरलता अभाव देखिनुमा मुख्य दोष चाहिँ राज्यले खर्च गर्न नसक्नु नै हो ।
भनेपछि तरलता परिचालनमा समस्या छ, होइन ?
हो, इन प्लो र आउट प्लोबीचको टाइमिङ मिस म्याच नै समस्याको कारक हो । अब हुन्छ के भने सरकारले पहिले कोषमा थुपार्छ अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर भुक्तानी दिन्छ । तर, हाम्रो बैंकमा ऋणको माग भने सधैँ उस्तै प्रकारले हुन्छ । त्यसैले गर्दा नगदको श्रोत र त्यसको परिचालनमा समयको युक्तता नहुनु नै समस्याको जड हो ।
यो मौकामा बैंकले ब्याज बढाउने अवसर पनि पाउँछन् नि ?
हो, हामी ब्याज बढाउन बाध्य हुन्छौँ । तर, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर पार्छ भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ । हामीले बढाएको ब्याजको असर अन्ततः बजार मूल्य र आम उपभोक्तासम्म पुग्छ । त्यसैले ब्याज बढाउने कुराबाट हामी खुसी हुनुहुँदैन । बरु राज्यको असक्षमताको कारण सिर्जना भएको मूल्य भने आम नेपालीले चुकाउनु परेको दुखद अवस्था हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
यस पटक त सरकारले बेलैमा खर्च गर्छ भनेर तपाइहरू झुक्किनु भएको पो हो की ?
हामीलाई आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकारी खर्च हुन्छ होला जस्तो लागको थियो । आयात ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान थियो । ऋणको माग पनि धेरै नै थियो । त्यसैले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही खुलेर लगानी गरे । तर, संरचनागत सुधार भएन । हामीले सोचेजस्तो सरकारले खर्च गरेन । परिणामतः अहिले तरलता अभाव देखियो ।
गएको दुई महिनामा मात्र ठुलो मात्रामा एलसी खुलेको देखिएको छ । आयात ह्वात्तै बढ्दा ठुलै समस्या त देखिँदैन ?
देशमा ठुला ठुला उद्योगहरू खुल्नेक्रममा छन् । भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, रड लगायतका उद्योग खुल्दा अर्बौँका एलसी खुल्छन् । त्यसबाहेक प्रमुख चाडहरू पनि नजिकै आउँदा व्यापारीहरूले त्यसलाई लक्षित गरेर गर्ने आयात पनि ठुलै हुन्छ । जसले गर्दा श्रोतको माग ठुलो छ ।
यसलाई सहज बनाउन के गर्ने त ?
यो काम राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायले गर्ने हो । यस्तो हुनसक्छ भन्ने देखिसकेपछि त्यसलाई के कस्ता नीतिगत व्यवस्था मार्फत सम्बोधन गर्ने भन्ने नियामकले नै सोच्नु पर्छ ।
खै के सोच्ला र, विकास बैंकले मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरेको कुनै कुरा सम्बोधन भएन ?
सिधै भन्नुपर्दा हामीले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउनु पर्‍यो भन्ने माग गरेको थियौँ । त्यसो त हामीलाई हकप्रद जारी गर्न निर्देशनले रोकेको पनि छैन । फेरि पनि कुनै विकास बैंकले त्यस्तो इच्छा राख्दा राष्ट्र बैंकले ‘अहिले नै नगरौँ’ भन्दै आएको हो । हामी विकास बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकले ‘ल हुन्छ’ भनोस् भन्ने सहजताको प्रतीक्षामा छौँ ।
भनेपछि राष्ट्र बैंकको रणनीतिक तगारो मात्रै छ ?
हकप्रद शेयर जारी गर्दा उत्पन्न हुने कतिपय अन्य विषय र प्रभाव पनि सायद उहाँहरूले देख्नु भएको होला । त्यसैले अन्य विकल्प रोज्न हामीलाई सुझाव दिनु भएको हो भन्ने मेरो बुझाई छ । जसरी अहिले विकास बैंकलाई डिभेञ्चर जारी गर्ने निर्देशन आएको छ त्यसलाई यसरी पनि पुँजी जुटाउन सकिन्छ भनेर विकल्प देखाएको रूपमा मैले बुझेको छु ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई अलि बढी नै भेदभाव गरे जस्तो लाग्दैन ?
हामीले अहिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुसँग नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । यसरी हेर्दा हामीलाई अलग वर्गमा राखेर छुट्टाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन । नियमनकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि हामीलाई ब्यासल २ लागू गर्न निर्देशन आइसकेको छ । त्यसैले अव वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्दा एउटै हिसाबले गरे हुन्थ्यो । अर्को वर्गलाई लक्षित गरेर खोलेको भनेर हामीलाई दिएको लाइसेन्सका आधारमा छुट्याएको जस्तो देखिन्छ । तर अब यसरी छुट्याइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन ।
विकास बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक र संस्थागत क्षमता नदेखेर पो हो की ?
यदि कुनै संस्थामा त्यस्तो समस्या देखियो भने नियामकले प्रतिस्पर्धात्मक र बलियो बन्न निर्देशन पो दिनुपर्‍यो त । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि नबुझेको कुरा होइन यो । पछिल्ला निर्देशिका र नीतिलाई केलाउने हो भने विकास बैंकहरुलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने नै उहाँहरूले ठानेको देखिन्छ ।
तर, कतिपय कुराहरू भने विरोधाभासपूर्ण छन् । हामीले कुन वर्गका ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएका छौँ । वित्तीय साक्षरता र पहुँच विस्तारमा हाम्रो कस्तो योगदान छ भन्ने कुरालाई भने मनन नगरिएको जस्तो देखिन्छ ।
तपाई वाणिज्य बैंकको समेत उच्च तहमा बसेर अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको व्यक्ति, के रहेछ वाणिज्य र विकास बैंकको फरक ?
म वाणिज्य बैंकबाट भर्खरै विकास बैंकमा आएको हो । यहाँ त मलाई गज्जब लाग्यो । साना साना ऋणीहरूले औपचारिक प्रणालीबाट सहजपुरमा ऋण लिइरहेका रहेछन् । यसरी हेर्दा के देखियो भने वित्तीय साक्षरता र बैङ्किङ प्रणालीमा आम मानिसहरूको पहुँच विस्तारमा वाणिज्य बैंकले ठुलो भूमिका खेलेको रहेछ । त्यसबाहेक आम ग्राहकहरूलाई आधुनिक बैङ्किङ (डिजिटलाइजेशन)समेत सँग जोड्न विकास बैंकको ठुलो भूमिका रहेछ ।
वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीचको तात्त्विक फरक भनेको चाहिँ यिनीहरूले सेवा पुर्याइरहेको वर्गमा नै देखियो । विकास बैंकले बैङ्किङ प्रणालीसँग अभ्यस्त नभएका वर्गलाई यो क्षेत्रसँग परिचित गराएको हुनाले यसको आफ्नो छुट्टै पकट रहेको छ । जसले गर्दा वाणिज्य बैंक पुगेको ठाउँमा समेत विकास बैंकलाई नागरिकहरूले आफ्नो बैंक भनेर स्वीकारेको देखियो । फेरि पनि खास फरक भनेको चाहिँ सेवा लक्षित वर्ग नै हो ।
तर, सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि बाध्यकारी बनाउँदै साना कर्जा प्रवाह गर भनेर निर्देशन गरेको छ नि ?
अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत साना कर्जा प्रवाह गर्न बाध्यकारी बनाएको स्थिति हो । ती बैंकहरुले पनि गाउँ गाउँमा गएर शाखा सञ्चालन गर्दै सेवा प्रवाह गर्दै आएको आधारमा हेर्ने हो भने समानता धेरै छ । तर, हामीलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । क्रेडिट कार्ड जारी गर्न दिइएको छैन । एलसी खोलेर व्यवसायीलाई सेवा दिन अनुमति छैन । उहीँ र उस्तै प्रकारको ग्राहकहरूबिच प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने । एउटै भूगोलमा रहेर उस्तै सेवा दिने तर हामीले प्रवाह गर्ने सेवामा जुन सीमितता छ त्यसले चाहिँ ठुलै समस्या बनाएको छ ।
हिजोका दिन गाडी, घर साना सवारी कर्जा फाइनान्स र विकास बैंकहरुले दिँदै आएका थिए । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले नै त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो लगानीको मुख्य क्षेत्र बनाएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा विकास बैंकहरुले ठुलो सञ्जालसहित राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा कारोबार क्षेत्रमा सीमितता हुनु कुनै ढङ्गले पनि न्यायोचित देखिँदैन ।
त्यो त बजारले विकास बैंकलाई नै विश्वास गरिरहेको छ होइन र ?
सही भन्नुभयो । अहिले मैले दाबी गर्न खोजिरहेको कुरा नै यही हो । आज वाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंकको शेयर मूल्य बजारमा बढी किन छ ? किनकि आम लगानीकर्ताले विकास बैंकमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ भन्ने ठानेका छन् । यसरी हेर्दा हामी सबल र सक्षम छौँ । त्यसैले क्षमता अनुसार काम गर्न पाउनु पर्‍यो ।
वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको चर्चा बजारमा व्याप्त छ, राष्ट्र बैंकले पनि प्रोत्साहन गरेको छ । के विकास बैंक पनि मर्जरमा जानु पर्छ भन्ने लाग्छ ?
हिजो वास्तवमा नै विकास बैंक धेरै थिए । सयको हाराहारीमा रहेका विकास बैंक अहिले घटेर १८ वटा झरिसकेका छन् । यो कि भयो भने मार्केटको डाइनामिक्सले नै त्यस्तो डिमान्ड गर्‍यो । कसैले दबाब दिएर बैंकको सङ्ख्या घटाएको त होइन ।
अब वाणिज्य बैंकको सन्दर्भमा मेरो निजी धारण भन्ने हो भने त्यस्ता बैंकहरुको सङ्ख्या अझै पनि बढी नै छ । यदि सङ्ख्या घट्यो भने त्यसले वित्तीय मध्यस्थता मूल्य घटाउने रहेछ । अब सङ्ख्या कति थियो र कति हुने भन्ने कुरा फरक हो । जे होस अहिले चाहिँ धेरै छन् । र घटे पनि ग्राहकले सुलभ बैङ्किङ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका चाहिँ नयाँ योजनाहरू के कस्ता छन् ?
हामी नयाँ शाखाहरू विस्तारबारे पनि सोचिरहेका छौँ । यसै आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जन हाराहारीमा शाखा विस्तार गर्ने र अन्य सेवाहरू थप गर्ने योजना छ । त्यसबाहेक पुराना मर्जरहरूको प्रक्रियामा कहाँ कसको कुन स्तरको उपस्थिति र सेवा थियो भन्ने कुरा समेत अध्ययन सकेर सोही अनुरूप कार्य योजना निर्माण गर्नु छ । त्यसैले धेरै नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालनको तयारीमा छौँ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलले बोलायो साधारण सभा
यस वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको लाभांश हालसम्मकै कम
कामना सेवा विकास बैंकले बोलायो साधारण सभा, १९.४७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
कुमारी बैंकले कात्तिक १६ गते ८.६७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने
नेपाल बैंकले सार्वजनिक गर्यो पारिवारिक खुशीबारेको भाबुक भिडियो